Filtrer les éléments par date : lundi, 18 mai 2020
Toerana nahitana tranga Covid-19 azo avy amin’ny fifampikasohana na "cas contact" miisa 16 teny Manarintsoa Isotry, tamin’ireo tranga vaovao niisa 45 araka ny tatitra navoakan’ny Foibem-pibaikoana momba ny Covid-19 ny sabotsy 16 may 2020.
Nidina teny an-toerana ny alahady 17 may 2020, ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka, notarihin'ny Minisitra Ahmad Ahmad, sy ireo ministera hafa mpiara-miasa, nanatanteraka fitiliana faobe amin'ny valanaretina "Coronavirus". Voakasik’izany ireo Fokontany efatra manodidina an’i Isotry Manarintsoa.
Kidnapping: Zandary iray nidoboka eny Tsiafahy
Zandary iray kilasy voalohany, miasa eto an-drenivohitra, no tazomina am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjaben’i Tsiafahy taorian’ny nanolorana azy ny Fampanoavana ny faran’ny herinandro teo. Voarohirohy tamin’ny fakana an-keriny an’i Anil Karim, ilay Karana mpandraharaha mizaka ny zom-pirenena frantsay nisy naka ankeriny tamin’ny 27 aprily 2020 ity zandary ity.
Vehivavy iray, antsoina hoe : Zo ihany koa tazomina am-ponja ao Antanimora noho izy tafiditra anaty fikambanan-jiolahy sy kidnapping.
lundi, 18 mai 2020 21:24
Antsahalalina - Manjakandriana: Zazalahy kely iray ahiana ho voan’ny Coronavirus, nakatona hatramin’ny fiangonana itandreman’ny rainy
Zazalahy iray, zanaka pastera amina fiangonana zandriny iray ao Ambohitseheno- Manjakandriana no ahiahiana ho voan’ny Coronavirus tao amin’ny Kaominina Antsahalalina, Distrikan’i Manjakandriana. Rehefa natao ny fitsapana tamin'ny alalan'ny TDR dia voamarina (cas positif) izany.
Nentina niverina any Antananarivo io zaza io hatao fitsapana lalina kokoa (PCR), araka fepetra noraisin’ny dokotera sy Ben'ny tanàna ao an-toerana. Nampahafantarin’ireto farany izany ny lehiben'ny Distrika Manjakandriana.
Hisy ny fandrarahana fanafody ilay trano nisy ilay zaza, ary izay olona rehetra nifanerasera taminy dia hahiboka tanteraka ao an-tranony ary tsy misy mahazo mivoaka mandrapahavita ny fitsapana rehetra mandritra ny 14 andro.
Nakatona nanomboka ny sabotsy 16 mai ilay fiangonana itandreman’ny rain’ilay zazalahy kely ahiana ho voan’ny Coronavirus.
lundi, 18 mai 2020 21:02
Covid-19: Misy tranga roa mampiahiahy ato Antalaha
Nanao « prélèvement » tamina olona roa ahiahiana ho mitondra ny tsimokaretina Covid-19 ny teto Antalaha. Nalefa omaly tamin’ny fiaramanidina ao Antananarivo ireo singa ireo hatao fitiliana. Eo ampiandrasana ny valin’izany ny aty an-toerana.
Tato ho ato dia misy ny sambo mitondra olona avy any Toamasina tafiditra aty SAVA, tonga eto Antalaha. Misy ihany koa ireo mandeha an-tongotra mitety ala avy any Toamasina tonga aty SAVA, ka manahy ny aty an-toerana sao avy amin’ireny no hidiran’ity valanaretina ity aty an-toerana.
Misy ny andia-miaramila nalefa avy ao Sambava hanara-maso ny fidirana an-tsokosoko aty an-toerana.
lundi, 18 mai 2020 20:56
Ambatofitatra - Sambava: Tovolahy matin’ny « tuberculose » nampiahiahy ny mponina
Nodimandry ity alatsinainy 18 may ity ilay tovolahy rehefa notsaboina tao amin’ny hopitaly tsy miankina iray teto Sambava. Efa ity fahafatesana ity vao fantatry ny Fokontany Ambatofitatra onenany fa tonga aty Sambava ilay tovolahy.
Nidina teny an-toerana nanao fanadihadiana ny mpiasan’ny fahasalamana, notarihin’ny Médecin Inspecteur androany, ary tamin’izay no nahafantarana fa voan’ny raboka na « tuberculose » io tovolahy io, nitsabo tena tao Antananarivo izy ary natao fizahana tao amin’ny Institut d’Hygiène Social Analakely araka ireo taratasim-pitsaboana hita tao amin’ny fianakaviany.
Ny fomba nahatongavany taty Sambava no mampiahiahy ny olona, indrindra amin’izao fotoana mampisy ny valanaretina Covid-19 izao.
lundi, 18 mai 2020 20:34
Nosy Malagasy: Nantsoina teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny ny Masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara
Nampiantso an’i Christophe Bouchard, Masoivohon’i Frantsa, ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny androany Alatsinainy 18 May 2020, mba ilazana aminy ny fahatairan’ny Fanjakana Malagasy noho ny vinavinan’ny Fanjakana frantsay hanangana ny antsoiny hoe : « Réserve Naturelle Nationale» eo amin’ny Nosy Glorieuses, sy ny fanoheran’ny Fanjakana malagasy izany amin’ny fomba hentitra indrindra, hoy ny minisitra Tehindrazanarivelo Djacoba A.S. Liva.
lundi, 18 mai 2020 20:33
Antsirabe: Nisy kamiao nitondra olona an-tsokosoko avy any amin'ny faritra voarara tsy hivoaka
Raikitra ny ombay mitady eto Antsirabe androany, ikarohana kamiao iray, mitondra ny laharana 8840 TAE. Nitondra olona antsokosoko teto Antsirabe avy any amin'ny faritra voarara tsy hivoaka io kamiao io androany 18 may 2020 tamin'ny 4 ora hariva.
Nanaovana ampitapitao mba hanantona ny biraon'ny Cellule Opérationnelle Covid-19 ao amin'ny Région Vakinankaratra na ny mpitandro filaminana akaiky azy ny mpamily sy ilay fiara.
lundi, 18 mai 2020 17:05
CHU Andrainjato – Fianarantsoa: Nozaina androny ny "prime de risque" ho an'ny Mpitsabo ireo mararin'ny Covid-19
Fampanantenana nataon'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny diany teto Fianarantsoa ny 22 aprily 2020, ka nitsidihany ny CHU Andrainjato ny hanomezana "indemnité spéciale" ho an’ireo mpitsabo, mpitsabo mpanampy, mpiasan’ny fahasalamana izay mandray an-tanana ny fitsaboana ireo mararin’ny Covid-19.
Notanterahina androany ny fandoavana izany teny an-toerana. Nanolotra mivantana izany ny Goverinoram-paritra Matsiatra Ambony, Razafindrafito Lova Paupil.
lundi, 18 mai 2020 17:03
Covid-19: Olona namita iraka tao Mahajanga voamarina fa mitondra tsimokaretina
Mpiasa iray ao amin’ny ministeran’ny Fitsarana Antananarivo, namita iraka tao Mahajanga nanomboka tamin’ny 11 may 2020 no voamarina tamin’ny fitiliana natao fa mitondra tsimokaretina. Tsy nahitana soritr’aretina izy.
Nandraisana fepetra avy hatrany ka nakarina aty Antananarivo ny alin’ny alahady 17 may io olona io, vao fantatra ny valin’ny fitiliana azy ary tsaboina ao amin'ny CHU Anosiala. Narahina mpitandro ny filaminana ny diany miazo ny renivohitra ; ireo namany kosa dia mbola arahi-maso akaiky eto Mahajanga.